Ihe Mere Ịgbapụta Anyị Ji Dị Anyị Mkpa
“Mmadụ nke nwaanyị mụrụ, ndụ ya na-adị mkpụmkpụ, jupụtakwa ná nsogbu. Ọ pụtawo dị ka okooko osisi, e wee bipụ ya, ọ na-agafekwa ọsọ ọsọ dị ka onyinyo, ọ naghịkwa adịgide.”—Job 14:1, 2.
Kemgbe ụwa, ọ na-agụ ụmụ mmadụ agụụ ịdịrị ka okoro na agbọghọ na-aga ruo mgbe ebighị ebi, ahụ́ esiekwa ha ike. Ma, ọ na-ewute anyị na e meekwa elu mee ala, anyị ka na-anwụ anwụ. Ọ karịala puku afọ atọ Job kwuru ihe ahụ dị na Job 14:1, 2. Ma, ihe ahụ o kwuru ka bụkwa eziokwu ruo taa.
Ndị mmadụ n’ebe niile n’ụwa na-achọ ịdị ndụ ebighị ebi. Baịbụl kwuru na Chineke kere anyị ka ọ na-agụ anyị agụụ ịdị ndụ ebighị ebi, nakwa ka ọ na-agụ anyị agụụ ịma otú ndụ ebighị ga-adị. (Ekliziastis 3:11) Ebe ọ bụ na Chineke hụrụ anyị n’anya, ì chere na ọ ga-eme ka ihe ọ ma na anyị agaghị enwetali na-agụ anyị agụụ? Ị zaa mba, ị zatara ya. Baịbụl kwuru na ọnwụ bụ onye iro anyị nakwa na ‘a ga-eme ka ọ ghara ịdị irè.’—1 Ndị Kọrịnt 15:26.
Ọnwụ bụ onye iro anyị n’eziokwu. E nweghị onye isi dị mma ga-achọ ịnwụ. Ọ na-abụ anyị hụ ihe nwere ike igbu anyị, anyị ezeere ya, gaa zoo, ma ọ bụkwanụ gbalaga. Anyị rịawakwa ọrịa, anyị achọwa otú anyị ga-esi gwọọ onwe anyị. Anyị na-agbalị ike anyị niile ka anyị ghara ịnwụ.
Ma, è nwedịrị ihe gosiri na ọnwụ a na-egbu ụmụ mmadụ kemgbe ga-emecha kwụsị? Ee, e nwere. Jehova Chineke, bụ́ Onye kere ụmụ mmadụ, ekeghị ha ka ha na-adị ndụ afọ ole na ole ma nwụọ. Mgbe Chineke kere ụmụ mmadụ, o bughị n’obi ka ha na-anwụ anwụ. Ọ chọrọ ka ha dịrị ndụ ebighị ebi n’ụwa. Jehova ga-emechakwa mee ihe a ọ chọrọ ime n’ihi na ọ na-emezu ihe ọ bụla o zubere.—Aịzaya 55:11.
Oleezi otú a ga-esi ewepụ ọnwụ? Kemgbe ụwa, ụmụ mmadụ anwaala ike ha ka ha wepụ ọnwụ ma ha enwebeghị ike iwepụ ya. Ha ka na-anwakwa ike ha ruo taa. Ndị sayensị emepụtala ọgwụ mgbochi ọrịa na ọgwụ ndị e ji agwọ ọrịa. Ọgwụ ndị a emeekwala ka ọrịa belata. Ndị sayensị amụọkwala ọtụtụ ihe gbasara otú ihe ndị dị n’ahụ́ mmadụ si arụ ọrụ ka ha mara otú ha ga-esi eme ka ndị mmadụ na-adịtekwu ndụ aka. N’ọtụtụ ebe n’ụwa, ndị mmadụ na-adịtekwu ndụ aka karịa otú ha na-adịbu n’otu narị afọ gara aga. Ma, ndị mmadụ ka na-anwụkwa anwụ. Ihe Baịbụl kwuru bụ eziokwu. Ọ sịrị na ọ bụ “n’ájá ka ha niile na-alaghachi.”—Ekliziastis 3:20.
Ma, otu ihe ga-eme anyị obi ụtọ bụ na e nwere onye ga-ewepụrụ anyị nsogbu a nyịrị ụmụ mmadụ. Jehova Chineke ahaziela otú ọ ga-esi zọpụta anyị ma ọ bụ napụta anyị n’aka ọnwụ. Ọ bụ Jizọs Kraịst ka ọ ga-esi n’aka ya mee ya.
mailto:?body=Ihe Mere Mgbapụta Ji Dị Anyị Mkpa%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2015162%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe Mere Mgbapụta Ji Dị Anyị Mkpa
MACH 2015 Gịnị Ka Jizọs Gbapụtara Anyị na Ya?
mailto:?body=MACH 2015 Gịnị Ka Jizọs Gbapụtara Anyị na Ya?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dw15%26issue%3D20150301%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=MACH 2015 Gịnị Ka Jizọs Gbapụtara Anyị na Ya?